Fanatsarana ny fanabeazana :: Nandray mpampianatra telo amby roapolo ho lasa mpiasam-panjakana ny Filoha • AoRaha
Fanatsarana ny fanabeazana Nandray mpampianatra telo amby roapolo ho lasa mpiasam-panjakana ny Filoha
Nitohy tetsy amin’ ny Sekoly fana­beazana fototra (Epp) sy Sekoly ambaratonga faharoa (Ceg) Angarangarana tetsy Anosibe, omaly, ny fizaràna kojakojam-pianarana nahitana tablety ary boky nataon’ny Filoham-pirenena Rajoelina Andry. Nandritra ity lanonana ho fanatsarana ny tontolon’ny fanabeazana ity no nandraisany mpampianatra Fram miisa telo amby roapolo ho lasa mpiasam-panjakana. Ny roapolo amin’izy ireo no avy ao amin’ny Epp sy Ceg Angarangarana. Ny telo hafa avy ao amin’ny Epp Ankadifotsy II. Niavaka ny fomba nandraisana an’ireo mpa­mpi­anatra ireo ho lasa mpiasam-panjakana.
Taorian’ny kabary nataon’ ny Filoham-pirenena no nisy mpampianatra iray nisolo tena an’ireo mpanabe roapolo avy ao amin’ny Ceg sy Epp Angarangarana. Nitaraina sy nitalaho tamin’ny Filoha izy fa efa am-polo taona maro ry zareo no niasa ho mpampi­anatra Fram kanefa tsy mbola voaray ho mpiasam-panja­kana hatramin’izao. Nova­lian-dRajoelina Andry ny heta­hetany.
Fitsinjovana an’ireo marefo
Teo no ho eo ihany dia nasaina nikarakara ny taratasy fangatahana ho mpiasam-panjakana ireo mpanabe ireo. Nomena ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena, Volahaingo Marie Thérèse, izay nanatrika ny hetsika natao teny an-toerana izany, avy eo.
Nisy mpampianatra telo hafa avy ao amin’ny Epp Anka­difotsy II, isan’ny tonga nanatrika ny lanonana, no nangataka ny handraisana azy ireo mba ho lasa mpi­asam-panjakana ihany koa. Neken’ny Filoha koa ny fanga­tahan’izy ireo. Teo no ho eo no nasaina nikarakara taratasy ry zareo.
Ankoatra an’ireo fitaovam-pianarana samihafa natolotry ny Filoha dia nambarany nandritra ny kabary nataony koa fa horaisiny an-tanana ny fandoavana ny saram-pianaran’ireo ankizy rehetra mianatra ao amin’ny Epp sy Ceg Angarangarana, Anosibe. Nasehony ny finiavany hitsinjo an’ireo fianakaviana marefo.
“Tsapako fa sahirana ianareo avy eto Anosibe. Haveriko ny volan’ireo ray aman-dreny efa nandoa ny saram-pianaran’ny zanany. Haloako kosa ny an’ireo izay tsy mbola nahavita izany.
Rahampitso (Ndlr: 07/11/2019) ihany ianareo dia miverina milahatra eto manoratra ny anaran’ny zanakareo ary tsy hisy vola haloanareo intsony amin’izany”, hoy izy.
Notsiahivin’ny Filoha fa “mbola hitohy any amin’ireo sekolim-panjakana rehetra manerana an’i Madagasikara ny tosika amin’ny tontolon’ny fanabeazana tahaka izao”.
Fihanaky ny valanaretina Maherin’ny fitonjato ny marary vaovao voan’ny Covid-19
Fandevenana mpanakanto :: Henin-kaja amam-boninahitra ny fanaovam-beloma farany an’i Dadah
Fiainan’antoko :: Hiverina tsy ho ela amin’ny sehatra politika ny Hvm